Ginea ekoatera dia manokatra sisintany ho an'ny mpitsidika avy amin'ny firenena CEMAC
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ginea ekoatera dia manokatra sisintany ho an'ny mpitsidika avy amin'ny firenena CEMAC
Nanambara i Guinea ekoatorialy fa ny visa ho an'ny teratany CEMAC rehetra izay mandeha dia avela.
Nandritra ny fivoriana an-tampon'ny fihaonamben'ny vondrom-bahoaka Afrikana Afovoany sy ara-bola (CEMAC) tao Ndjamena, Chad tamin'ity herinandro ity, nanambara ny Repoblikan'i Guinea Equatoriale fa hefaina ny visa ho an'ireo teratany CEMAC rehetra izay mandeha. Ny lohahevitry ny fanangonana ny Lehibem-panjakana sy ny Praiminisitra dia ny "fampidirana haingana ho an'ny CEMAC vao misondrotra".
Amin'ny maha iray amin'ireo toekarena mitombo haingana indrindra any Afrika Afovoany Afovoany, ny sehatry ny fizahan-tany Guinea Equatorial dia antenaina ho mpahazo tombony voalohany an'io politika io. Ny faritra Afrikana Afovoany ara-toekarena sy vola (CEMAC) dia mampifandray mpanjifa 37 tapitrisa izay avy any Chad, Gabon, Cameroon, Repoblikan'i Afrika afovoany, Kongo-Brazzaville ary Guinea Equatoriale. Ginea ekoatera no fonenan'ny Parlemanta CEMAC.
Eo ambanin'ny drafitra fampandrosoana Horizonte 2020, ny sehatry ny fizahan-tany dia jerena ho singa iray amin'ny drafitra fanasam-pifanankalozan'ilay firenena. Amin'izao fotoana izao, i Guinea Equatorial dia mitazona hotely fandraisam-bahiny sy fialan-tsasatra maneran-tany, taranja golf tompon-daka, morontsiraka fasika fotsy madio ary ala afrikanina misy ny natiora 24/7.